Raad Raac News Online
Wed, 01 Jul 2015 11:00:42 +0000
1da Luulyo oo laga Xusay Magaalada Kismaayo.
Magaalo Madaxda Maamulka Jubba ee Kismaayo waxaa lagu qabtay Habeenimadii xalay ahayd munaasabad lagu maamuusayay 1da luulyo oo ahayd markii ay Gumasytaha talyaaniga ka qaateen Xoriyadoodii Gobalad koonfureed ee Somaliya sidoo kalan ay Midoobeen Waqooyi iyo koonfur.
Maalinta Kowda luulyo ayaa ah Markii ay Xoriyada Qateen gobolada Koonfurta ee soomaaliya iyo Midawgii Waqooyi iyo Koonfur halkaas oo lagu Askumay Jamhuuriyada Sooaaliya.
Waxaa Munaasabada Caawa ka qayb galay Madaxweyne ku xigeenka labaad ahna ku simaha Madaxweynaha Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud luga dheere Xubno katirsan labada gole ee Dowlada siyaasiyiin wax garad iyo Haween.
Dhamaan Madaxdii iyo Marti sharaftii goobta ka hadashay ayaa ku Dheeraday Ahmiyada ay leeyahiin Maal maha Xuriyada Soomaaliya iyagoo dhanka kale wax Aan dhacaynin ku Tilmaamay hadal maal mahii lasoo dhafay la isla dhex marayay oo ahaa in Calanka soomaaliya lagu gubay Kismaayo waxaana ay Arintaas lagu tilmaamay mid been iyo boro bogaandho ah oo la doonayo in Jubbaland Lagu suurad Xumeeyo.
Deg Deg:- Ahlusunna oo Madaxweyne ku dhawaaqday
Wed, 01 Jul 2015 11:00:23 +0000
Madaxweynaha Maamulka cusub oo ay Ahlu sunna kaga dhawaaqday Magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa loo doortay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ahaa Gudoomiyaha Golaha fulinta Ahlu sunna Waljamaaca.
Doorashada maanta waxaa kula tartamayay Sheekh Maxamed Shaakir Musharixiin kale oo ay ka mid ahaayeen, Wasiirkii arrimaha gudaha Ximan iyo Xeeb, Maxamed Xaaji Xuseen iyo Afhayeenkii Maamulkaasi Careys Maxamed Xaaji.
Maamulkaan cusub oo loogu magacdaray Maamulka gobolada dhexe ayaa waxa ay Ahlu sunna sheegtay in uu ka kooban yahay Hiiraan ,Galgaduud iyo Mudug.
Arrintaani waxa ay kusoo beegantay iyada oo Magaalada Cadaado lagu dhameystirayo Maamulka Galmudug, oo lasoo dhameystiray Barlamankiisa, toddobaadka dambana lagu dooranayo Madaxweynaha Maamulka Galmudug.
Al-shabaab oo Soo badhigay Meydadka Askartii Burundi”Sawiro”
Wed, 01 Jul 2015 10:24:35 +0000
Deg Deg:- Ahlusunna oo Madaxweyne Dooraneeysa
Wed, 01 Jul 2015 10:16:58 +0000
Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Maanta Maamulka Ahlusunna Waljamaaca ay dooranayaan Madaxweyne uu yeelanayo Mamaulka ay ka dhisayaan Gobolada Dhexe ee Dalka Soomaaliya.
Munaasabad ay ku dooranayaan Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe ayaa ka hada ka soconeysa Magaalada Dhuusamareeb.
Maamulkaan Ahlusunna ay dhiseeyso ayaa ka soo horjeeda Maamulka Dhismihiisu uu ka soconayo Magaalada Cadaado ee Isla Gobolka Galagaduud.
Inkastoo aan Wali lagu dhawaaqin Madaxweynaha Maamulka Ahlusunna ay dhisayaaan ayaa hadana waxaa uu Caqabad ku yahay Maamulka loo dhisayo Koofurta Mudug iyo galgaduud oo Asan Dhankiisa ay hareeyeen Mucaarado farabadan.
SAWIRRO : xuska 1 luulyo oo siwayn Garowoe looga Xusay iyo Madaxwayne Gaas oo ka qayb Galay.
Wed, 01 Jul 2015 08:57:54 +0000
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng.Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa caawa aqalka Madaxtooyada Puntland ee Garoowe kaga qeyb-galay munaasibad balaaran oo lagu xusayey koowda luulyo oo ku beegan maalintii xoriyadda umadda Soomaaliyeed ka qaateen gumaystaha iyo midowgii labada Gobol.
Xafladda ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Wasiiro katirsan xukuumadda Puntland, saraakiisha sare ee caiidamada Puntland, Isimo, Waxgarad, Aqoonyahan, Haween, Dhalinyaro, dadweyne badan kuwaasi oo diyaar u ahaa ka qeyb-galka munaasibadaan balaaran.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey madasha ayaa umahadceliyey dhammaan ka soo qeyb-galaayasha xafladda , isagoona sanadkaan sanadkiisa kale alle uga baryey in nabad iyo barwaaqo umadda Soomaaliyeed ku gaaraan .
” Konton iyo shansano kadib waxaa inoo soo baxaya runtii in xornimadeeni gaasir noqotay, in gobanimadeeni ay kala dhantaalantahay , konton iyo shansano kabacdi soomaaliya ay daydayayso inay dib isugu soo laabato” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in maanta ay Puntland tahay dhul nabad ah oo qofkasta oo Puntland jooga uu ku seexdo nabad kuna soo tooso, waxaana uu sigaar ah ugu mahadceliyey ciidanka amaanka Puntland oo har iyo habeen u taagan ka shaqeynta amaanka Puntland.
” Puntland cidna gorgortan kala gelimayso amnigeeda ama ha ahaato cadow gude ama mid dibadeedba , magan ugama aha Puntland amnigeeda Shabaab iyo sharwadayaal , magan ugama ma ahan maamul gacan ku rimis ah oo dawladda federaalka ahi ay malxal u raadinayso intaba Puntland way isaga filantahay ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
” Puntland marna u dulqaadan mayso in si horumarkeeda loo wiiqo oo loo dhaawaco in manigeeda khalkhal lageliyo , sababtoo ah ujeedada Puntland amnigeeda loo farafaray naayaa waxaa weeye in horumarka iyo yididiilada iyo himilada aanu leenahay hadaanu reer Puntland nahay in la waxyeeleeyo taasna ma aqbalayno ” Ayuu hadalkiisa raaciyey Madaxweynuhu.
” Dadka Puntland meelkasta oo ay joogaan waxay kalsooni buuxda ku qabaan in ay leeyihiin ciidan difaaceeda ku filan ama hanoqdo cadow dibadeed ama cadow doqon ah oo wax magarato ah oo gudaheeda jooga labadaba Puntland waa ay isaga filantahay”
” Puntland nin jecel iyo nin neceba waa furihii Nabadda Soomaaliya , Puntland waa buundadii midnimada Soomaaliya , Soomaaliya waxaa isu haya waa Puntland , Puntland haday ka baxdana wax hagaagaya majirto, Puntland waa hooyadii iyo aabihii dawladda federaalka Sooomaaliya , saa daraadeed cidna ka aqbali mayso in wanaagi ay ka shaqeynaysay xumaan loogu badalo ”
Madaxweynaha ayaa sheegay in shirka cadaado ka socda uusan aheyn mid maamul federaal ah lagu dhisayo , balse waxaa uu tilmaamay in uu yahay shirqool xamar laga soo maleegay oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo maamul nabad ah oo jira.
” Waxaan idiin sheegayaa in Puntland ay ka horaysay Federaalka , Puntland uma baahna in federaal aqoonsado , jawaari baan waxaan ka maqlayey isagoo leh maamulada aanan aqoonsaneyn marka jawaari cid maanta uga baahan in uu aqoonsado majirto ” Ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynuhu.
Shirka ka soconaya Cadaado ayuu Madaxweyne Gaas sheegay in masuuliyad daradiisa ay dusha u ridan doonto dawladda federaalka Soomaaliya , maadama ay iyadu garwadeen ka tahay shirkaasi .
” Waxay lahaayeen xuduudayadu waa Nugaal sida ay ku qorteen dastuur ku sheegooda ” aalatahay , sayid maxamed cabdulle xasan baa waxaa laga sheegay ninka yiri waxbaan gani anoo gol iyo ceyn jooga ee yiri badii garacad baan gudub u weydaaran godka lagu cadaabyow muxuu go’uhu been sheegay ”
” Waxaa hubaal ah marka ay runtu takto xuduudu aysan Nugaal noqoneyn , xuduudu waxaa ay noqonaysaa Godinlabe iyo Guriceel , waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka ah hadii ay ka waantoobi weydo dhagarta iyo shidada ay Soomaali kula dhexjirto oo maalin walba Gobol nabad ah dhib la doonayso in Puntland dastuurkeedu qodobkeeda afaraad uu u ogolyahay in masiirkeeda iyo aayaheeda ka tashato”
” Wax masuuliyad oo gaar ah oo Puntland ka saaran majirto Soomaalinimo xamar iyo cadaado midna laga rabin , Soomaalinimo hadii ay nacfi iyo dhaqaale lahayd xamar baa qaadatay marka ninkii dheefteeda haystay haduu dhimashadeeda ka shaqeeyo isaga ayaa ku dharag la’a uguna baahi badan ”
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu dambeyn sheegay in hadii inta xun ee yar ee ku ciyaaraysa magaca Soomaalinimada la xakameyn inay ka lifikarto in lakala tago oo Soomaaliya kala irdhoowdo .
Haweeney Xaamilo ah oo lagu dilay Garbahaaree
Wed, 01 Jul 2015 07:27:21 +0000
Hal Qof ayaa ku dhintay, mid kalana waa uu ku dhaawacmay Weerar askari ka tirsanaa ciidamada dowladda uu ka geystay goob ganacsi oo ku taalla Magaalada Garbahaareey ee Gedo.
Qofka dhintay oo Haweeney ahayd ayaa lagu magacaabaa Khadro Geedo qorow, halka qof kale oo ka mid ahaa dadkii joogay goobta ganacsi uu dhaawacmay.
Lama oga sababta dilka ka dambeyso ,hase ahaatee warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu ula dan lahaa inuu dilo ninka shacabka ah ee soo galey Goobta Ganacsiga gabadhan.
Ciidamo ka tirsan Dowladda oo soo gaaray goobta ayaa gacanta ku dhigay askari iyada oo Maamulka Garbahaareey uu sheegay in uu Maxkamad soo taagayo.
Kenyaati lagu tuhusan yahay Alshabaab oo lagu qabtay xaduuda
Wed, 01 Jul 2015 07:09:41 +0000
Xad Beneedka Soomaaliya iyo Kenya waxaa la soo sheegayaa in saacadihii ugu danbeeyay lagu qabtay nin Kenyaati ah kaasoo lagu tuhusan yahay inuu Alshabaab ku biiri rabay.
Saldhiga Boliiska Mooyaale ayaa ninkaan lagu hayaa halkaasoo su’aalo lagu weydiinayo iyadoo saraakiisha Boliiska Kenya ku tuhusan yihiin inuu dhanka Soomaaliya u talaabi rabay si uu alshabaab ugu biiro.
Taliyaha Mooyaale ayaa saxaafada u sheegay inay baaritaan wadaan wixii ka soo baxa ay si rasmi ah warbaahinta ugu sheegi doonaan marka la eego dacwada loo heysto ninkaani Kenyaatiga ah.
“waxaan aaminsahay inuu qorsheynayay sidii uu ugu talaabi lahaa dhanka Soomaaliya si uu uga bar bar dagaalamo kooxda alshabaab”ayuu yiri taliyahaasi
Maaha markii ugu horeysay oo xad beeneedka lagu qabto rag dhalashadoodu kenyaati tahay kuwasoo lagu heysto inay alshabaab gacan siinayeen.
Ban ki-moon oo xalay ka qeybgalay Xus Mareykanka loogu sameeyay Maalinta 1-da Luulyo
Wed, 01 Jul 2015 07:07:36 +0000
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobe Ban ki Moon ayaa xalay ka qeybgalay xaflad ay diblomaasiyiin Soomaaliyeed ku qabteen Magaalada New York ee dalka Mareykanka kaasoo lagu xusay 1-da Luulyo oo ah xirnimadii Soomaaliya.
Bank-moon ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka qebgalo xaflada 1-da Luulyo isagoo dhamaan umada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay qiimaha ay u leedahay maaalintaasi.
“waxaan ku faraxsanahay inaan caawada ummada soomaaliyeed oo dhan la qeybsado maalinta 1-da Luulyo”ayuu yiri Ban ki-moon
Sidoo kale mas’uulkaan wuxuu soo hadal qaaday safar uu sanadkii hore ku yimid Magaalada Muqdisho isagoo tilmaamay in Soomaaliya ay wadada nabada cagta saartay.
Sidoo kale Nicholas kay ayaa sidaas oo kale Soomaalida ugu Hambalyeeyay maalinta 1-da Luulyo isagoo ku booroyay Soomaalida inay tiigsadaan higsiga 2016 oo ah in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho dadweyne.
Xasan Sheikh oo Hadalka Kenya ku Tilmaamay mid been abuur ah
Wed, 01 Jul 2015 05:04:25 +0000
Iyadoo Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Marwo Aamino Maxamed ay sheegtay in Dowladda Soomaaliya iyo Tan Kenya ay si hoose uga Heshiinayaan Dacwada ka dhalatay Muranka Biyaha Soomaaliya ee Dacwadeeda loo gudbiyay QM ayaa Madaxweynaha Soomaliya waxaa uu ka horyimid hadalkaasi.
Xasan Sheikh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in uusan jirin Wax ka laabasho ah oo ku aadan in Dacwada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay u gudbisay QM.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Kenya ay dooneeyso in si hoose loo dhameeyo Muranka Badda Labada Dowladdood ka dhaxeeya balse Dowladda Soomaaliya wali ay taagan tahah Go’aanki hore ee ahaa in aan la Boobi karin Biyaha iyo Dhulka Soomaaliya ay leedahay.
“Ma dhici doonto Dowladda Soomaliya oo Mas’uul ka ah Ummadda Soomaliyeed in ay ku dhaqaaqdo wax aysan Shacabkeeda raali ka aheyn,waxaan rabnaa in aan soo Ceshano waxii Badd ah oo ka maqan Qaranka Soomaaliyeed”ayuu yiri Xasan Shekh Maxamuud.
Daawo:Muqdisho oo laga Xusay 1-da Luuliyo
Wed, 01 Jul 2015 04:57:52 +0000